Xfce 4.16 inouya nekuvandudzwa kwakawanda kweichi chakareruka graphical nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
Zvishoma pazasi pegore nehafu yapfuura, chirongwa chiri kutarisira imwe yeLinux yakajeka mifananidzo yakakanda yekupedzisira huru yekuvandudza yacho. Maawa mashoma apfuura akadzokera kukanda imwe nekumwe kuvandudzwa, a Xfce 4.16 Izvo zvinotaurwa nevagadziri vayo yaive yakakosha kutenderera, kwete chete nekuda kwedenda, asi chimwe chinhu chakabatsira kuti chisiyane. Semuenzaniso, ivo vanotaura kuti ivo vakakwakuka kuenda kuGitLab.
El enda kuGitLab iko kuchinja kukuru, sezvo kuchibvumira nharaunda kutora chikamu zvakanyanya. Muchokwadi, ivo vanotaura kuti yakawanda yeiyo hombe changelog, inowanikwa pa Iyi link, zvine chekuita neizvi. Imwe shanduko huru ine chekuita nemufananidzo, iyo yavakagadzirisa kubva pamusanganiswa wakasarudzika wemifananidzo yakasarudzika iyo isingateedzere chero chirongwa kune chitsva, chinowirirana zvakanyanya. Une mamwe ese akanyanya kunaka nhau mushure mekucheka.
1 Xfce 4.16 Zvakakosha
2 Munguva pfupi pane yako Linux kugovera, zvinoenderana neyako yaunoshandisa
Xfce 4.16 Zvakakosha
Iwo hwindo maneja agamuchira akawanda ekuvandudza uye kugadzirisa maererano nekuumbwa uye GLX.
Vawedzera plugin nyowani kupaneru inonzi "statustray" iyo inosanganisa zvese iyo StatusNotifier uye izvo zvinhu zvefa kubva kuSystray. Izvi zvinosanganisira yekuzvivanza yekunakidzwa uye yakasviba modhi iri pamusoro nekukanganisa.
Tsigiro yezvikamu zvishoma.
Nyowani tebhu mu "About Xfce" iyo inoratidza yakakosha system ruzivo, senge mhando yeCPU neGPU.
Iko kugona kwekutsvaga uye kusefa kwawedzerwa mune iyo Kugadziridza Manager.
Iyo MIME Zvirongwa uye Anosarudzwa MaApplication dialogs akabatanidzwa kuita imwe inonzi "Predefined Applications".
Thunar yakagamuchira gadziriso zhinji uye mashoma maficha, sekumbomira kuteedzera / kufambisa mashandiro.
Mutungamiri wechikamu anopa rutsigiro rwakagadziridzwa rweiyo GPG 2.1 mumiriri uye iyo yekumisikidza dialog yakagadziridzwa nemaziso.
Simba reManeja rakagamuchira akawanda mabug fixes uye mashoma mashoma maficha, kusanganisira kuchenesa kweayo marongero dialog, inosarudzika inoonekwa chiratidzo chekuti kana 'Presentation Mode' inogoneswa, bhatiri mamiriro emodhi pamwe neakarurama uye otomatiki anodzora mashoma masosi emagetsi kana uchibatanidza kubva pajaja .
Iyo desktop yakanyanya kugashira bug fixes uye diki kugadzirisa, kusanganisira iyo nyowani default Wallpaper.
Iyo garcon menyu raibhurari yakagamuchira nyowani APIs uye ikozvino haichazovhura maficha sevana vemaitiro ekugamuchira menyu. Maitiro ari pamusoro apa akonzera kunyorera kupunzika pamwe chete, semuenzaniso, iro dashboard.
Iyo App Finder ikozvino inokutendera iwe kuti utore maapplication ne "frequency", mubatanidzwa we frequency uye topicality.
Kugadziridza kwekuvimbika: yakabviswa Gtk2, yakawedzera LibGTop, yakaiswa kuGtk> = 3.22, GLib uye GDBus> = 2.50.
Munguva pfupi pane yako Linux kugovera, zvinoenderana neyako yaunoshandisa
Kuburitswa kweXfce 4.16 zviri pamutemo asi, sekune dzimwe nzvimbo dzemifananidzo, izvozvi zvinongowanikwa mukodhi fomu uye zviri nani kumirira kugoverwa kwedu kweLinux kugadzirisa mapakeji. Wekutanga kunakidzwa navo ndevaya vanoshandisa sisitimu yekushandisa ine Rolling Release modhi yekuvandudza, senge sevha, iyo inoshandisa Manjaro xfce-usb uye inotarisira kuti mamiriro emifananidzo, ayo asiri fan guru, achavandudza zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Xfce 4.16 inosvika ine zvakawanda zvinogadziridzwa, senge kutaridzika kutsva uye kuonekana neGTK2
Ndine kusahadzika kwangu kwese kwese kutenderera kwekuparadzira kuchachinja nekukurumidza apo XFCE ichishandisa GTK2 ichienda kuGTK3 apo madhesiki mazhinji anoshandisa zvakanaka kugadzirisa desktop yeXFCE, uye kwete ese aripo muGTK3, saka pamwe maXFCE desktops anoramba ari chikamu akasanganiswa uye achishandisa x11 seye default graphical server.